Kuki Ekeresimesi Dị Mkpa Iji Mee Ka Withmụ Gị Bụrụ Nwa + vidiyo - Kuki
Ntụziaka Kuki Kuki ekeresimesi dị mfe
Mfe Kuki Ekeresimesi Dị Mkpa, Nke Dị Nro, Nke Na-eweta Nnukwu Onyinye Oge Oge Ezumike A
Achọrọ m ịbụ onye na-eme kuki kuki ekeresimesi. Agam abu onye izizi nabata na abughi m nnukwu onye kuki! Ike m na-adaba na achicha achicha. Ọ bụghị ruo mgbe m nwara nke a mfe kuki kuki uzommeputa site na Susan Trianos na echere m na enwere ike olile anya diri m! Enwere m mmasị na nhazi a n'ihi na ọ na-agbakọta ọnụ ngwa ngwa, ị nwere ike ịgwakọta ụtọ ndị na-amasị gị na oge na kuki anaghị agbasa! Ọ dị ka ụwa kasị oriri oriri-doh mana ọ maara… mma akatabi okop.
Oge ezumike amalitebeghị na ezinụlọ Marek mana nwa anyị nwanyị bụ Avalon na-elele akwụkwọ egwuregwu ụmụaka anya ma na-ahụ osisi Krismas na ụlọ ahịa. O nweela obi uto banyere 'onyinye' na Santa Clause nke di nma MA ugbu a o ruru afo ano, achoro m ya ka o ghota o joyu bu Inye onyinye nke mekwara bu asusu m na-ahu n'anya.
N’ihi ya, n’afọ a, mụ na ndị enyi anyị na ndị ezinụlọ anyị gbasara. Onweghi onyinye echere ahia. Ihe obula anyi nyere ibe anyi aghaghi iji aka me. Santa ga-ewetara ya ihe egwuregwu abụọ site na 'ụlọ ahịa ihe eji egwuri egwu' mana ọ bụ ya. Oge ubochi anyi gabu ichota ihe ndi enyi anyi.
Offọdụ n'ime onyinye ndị kachasị m nwere ike icheta ịnata mgbe m bụ nwata dara ogbenye na-etolite na mba ahụ. Uwe ejiri aka mee na akwa nke ndi nwanyi na ulo uka anyi, ihe ndi ozo sitere na Santa na kuki ndi agbata obi anyi!
Yabụ enweghị mgbaghara maka nwanyị achicha a. N'afọ a, anyị na-amụta otu esi esi kuki ma anyị ga-enye ha dị ka onyinye!
Mgbe m na-achọ kuki ime, ahọpụtara m kuki nke m chere na ọ dị ụtọ, enwere ike ime ha niile site na otu kuki kuki na ebe ọ dị mfe mụ na nwa m afọ anọ ịme. Banye kuki ekeresimesi kachasị mfe nke ụwa!
Ntụziaka Kuki Christmas
Ntụziaka a na-ama jijiji !! Ọ bụ ihe niile ịchọrọ ka esi esi nri kuki shuga ka ọ bụrụ! Agbaze-n’ọnụ gị obi nwayọ mana ọ ga-abụ ntakịrị nkọ! Nnukwu buttery na zuru okè nke ose. My kasị amasị sugar cookie recipe.
Ihe mbụ ị chọrọ ime bụ ime achịcha kuki gị. Emere m nke m ụbọchị gara aga ka m wee nwee ụbọchị dum na-eme kuki na-enweghị nkwụsịtụ na etiti mgbe kuki mgwakota agwa oyi. O doro anya ma ọ bụrụ na ị ekwela ka kuki kuki gi zuo ike kuki gị agaghị atọ ụtọ ka ọ ga-agbasakwa n'ihi na ịkwesịrị inye ntụ ọka ahụ ịmịta bọta na mmiri ara ehi. Crazy sayensị eziokwu eziokwu ebe ahụ.
Ozugbo mgwakota nri kuki gị si na friji ahụ, ọ ga-esitụrụ ike ịnọ na ngwa nju oyi mana ọ ga-adị nro ozugbo ị ji aka gị kpochie ya.
Etu esi agba agba kuki kuki
Mgwakota kuki shuga dị oke egwu. Ọ dịka ihe ị na-achọ mgbe ọ bụla play-doh nụrụ ụtọ. Nwere ike ịcha ya ncha jiri gel mado nri agba dị ka americolor agba? Naanị tinye obere tụlee ma gwakọta ya! Nwere ike iji agba ọ bụla ịchọrọ. Ejiri m ụfọdụ agba nri na-acha uhie uhie maka kuki ekeresimesi m.
Otu esi eme kuki swiiti
Nwere ike ịgbakwunye otu nta nke pepemint wepụ na ntụcha kuki gị na-acha uhie uhie (Echere m ma echefuru ya). Mfe tụgharịa uhie gị na ọcha ọcha mgwakota agwa n'ime obere bọọlụ, ihe dị ka tablespoons abụọ nke mgwakota agwa ọ bụla. Mgbe ahụ kpoo bọọlụ ahụ ka ọ bụrụ agwọ nke ha nhata.
Avalon hụrụ akụkụ a n'anya na ọfụma na-agbagọ agwọ ndị ahụ ka ọ bụrụ swiiti.
Ozugbo i mere swiiti gị niile, tinye ha na mpempe kuki na-acha akpụkpọ anụ ma tinye n'ime friza maka 15 nkeji.
Ozugbo ha jụrụ oyi, ị nwere ike ịme ha ahụ n’ekwentị akpọrọ ihe na 350 Celsius F maka minit 12-14 ruo mgbe nsọtụ bidoro ịtụgharị aja aja aja.
Otu esi eme kuki Pinwheel
Iji mee kuki kuki nke ekeresimesi anyị, emere m kuki m kuki na-acha uhie uhie n'ime rektangulu ihe dịka 1/4 ″. Emere m kuki kuki oge niile n'otu ụzọ ka nha kwekọọ. Ọ bụrụ na mgwakota agwa gị na-arapara n'ahụ, gbanye ntụ ọka ya na ntụ.
Mgbe ahụ ị na-atụkọta ahịhịa abụọ ahụ n’elu ibe ha wee tụgharịa ha gburugburu. Gbalịa ka ị ghara ịhapụ oghere ọ bụla ma ọ bụ kuki gị ga-enwe oghere n’ime ha mgbe ị na-egbutu ha.
Mgbe ahụ gbanye log kuki gị n'ime mmiri mmiri. Naanị m ji ụfọdụ egwurugwu na-enweghị nsogbu fesa n'ihi na ha jidere na oven. Mgbe ịchisịrị log gị, zuo ike log na friza maka ihe dị ka nkeji 30.
Ozugbo kuki gị jụrụ oyi, ị nwere ike iberi ha n'ime kuki n'ihe dịka 1/4 ″. Ọ dịghị mkpa ka zuo ike ha n'ihu. Naanị pịa ha n'ime oven ma mee achịcha maka minit 12-14 ruo mgbe ha malitere ịmalite aja aja n'akụkụ ọnụ ya.
Otu esi eme ka kuki ndi snow gwuru
Ugbu a n’elu kuki ekeresimesi nke gbagwojuru anya. Maka kuki ndị a, anyị ga-achọ ụfọdụ marshmallows, rodies candies, ọcha na ọchịchịrị chocolate swiiti gbazee, ezé ezé, akpa pipụ na ụfọdụ fesa.
ude mmiri na -esi ísì siri ike maka ịchọ mma
Kuki na-agbaze snowman na-agbaze dị mfe ịme ma ọ na-ewekwu ọrụ na ihe ndị ọzọ. Buru ụzọ buputa kuki kuki gi dika ihe dika 1/4 ″ gbara oke ma bipu ihe di 3 ″ okirikiri.
Tinye kuki gị gburugburu na mpempe akwụkwọ kuki na-eme achịcha ma mee maka minit 12-14 ruo mgbe aja aja aja gbara gburugburu. Mee jụụ nke ọma.
Mgbe kuki gị na-ajụ oyi, ị nwere ike ịmalite ịme ihe ịchọ mma snow gị.
Iji mee okpu, agbazere m swiiti gbazee. Ejiri m swiiti gbazee n'ihi na ha ga-akwụsi ike na friza ma ghara ịchọ iwe ọ bụla. Tinye ụfọdụ chocolate gbazee n'ime ọkpọkọ ọkpọkọ na ọkpọkọ ụfọdụ obere okirikiri na mpempe akwụkwọ akpụkpọ anụ. Plop obere swiiti rolo n’elu ma zuo ike maka nkeji 5 iji tọọ chocolate.
Maka ndị isi snow, ejiri m ụfọdụ Marshmallow. M kpụrụ ụfọdụ karọt imi si oroma fondant n'ihi na ndewo, M a achicha decorator na mgbe nile nwere obi ụtọ na aka. Nwere ike iji oroma fesaa ma ọ bụ ọbụna swiiti ọka ma ọ bụrụ na-amasị gị. Iji mee ka anya m dị m tinye ezé ezé na obere chocolate ma dọta na anya abụọ na ọnụ.
Ghichaa okpu ahụ na marshmallow na akwa chocolate na isi emeela!
Ozugbo kuki ahụ jụrụ, ị nwere ike ịkwanye na chọkọ chọkọ gbazee na kuki ndị ahụ. Chocolate ọcha na-amasị m kama icing eze n'ihi na ọ bụ naanị mfe na obere usoro karịa ịme icing eze.
Ozugbo ị nwetara chocolate, ị nwere ike pịa kuki ahụ n'ụzọ dị mfe iji mee ka chocolate gbanwere. Nke a bụ ibu duper mfe aghụghọ ma ọ bụrụ na ị na-achọghị ma ọ bụ na-amasị ime ka eze icing (dị ka m). Na mgbakwunye m chere na ọcha chọkọletị ahụ na-atọ ụtọ!
Debe isi snowman na chocolate ma tinye ụfọdụ fesa ma ọ bụ obere M & M's maka bọtịnụ.
Lụọ ọgụ ka ị mee ka ụmụ gị kuki. Typedị-A akara freak na m chọrọ ka na gbazee snowman kuki anya obere obere melty ma ihe ụdị ozi m ga-eziga Avalon? N’ihi ya, ahapụrụ m ha ka ha ka dịkwa ụtọ.
Cookies Ekeresimesi Dị Mfe Maka Kuki Exchange
Kuki Krismas ndị a dị mma inye dị ka onyinye ma ọ bụ maka mgbanwe kuki. Enwere ike kechie ha n'otu n'otu ma ọ bụ tinye ha n'ime igbe ejiri akwa ma ọ bụ kuki kuki. Naanị anyị na-etinye nke anyị n'ime igbe nwere anụ ahụ nwere ụta ma nye ha Papa maka ekeresimesi!
Enwere m ike ịgwa Avalon na ọ masịrị ya itinye aka na inye nna ya onyinye a ma amaara m na ncheta ahụ ga-arapara n'ahụ ya ogologo oge karịa ịzụrụ ihe site na ụlọ ahịa (ọbụlagodi enwere m olileanya).
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ile otu anyị siri mee kuki ndị a ekeresimesi a, ị nwere ike ilele vidiyo dị n’okpuru.
Ntụziaka kuki Krismas kachasị mfe! Ọ dị mfe, nwa m afọ anọ nwedịrị ike ime ya. M na-eme nke m ụbọchị na-aga, zuo ike ya n’abalị wee mee kuki n’echi ya. Ntụziaka a buru ibu iji mee kuki swiiti swiiti iri abụọ, kuki iri abụọ na iri na kuki iri abụọ na-agba agba. Nwere ike nweta ma ọ bụ obere dabere na nnukwu ị na-eme kuki gị. Oge Nkwadebe:abụọ aka elekere 30 Nkeji Oge nri:iri na ise Nkeji Oge niile:abụọ aka elekere Anọ Nkeji Calorisị:Ogbe 161kcal
▢16 oz (454 g) Salted bọta Ime ụlọ okpomọkụ. Nwere ike ịbụ butter butter ma ọ bụrụ na ị tinye gị onwe nnu na uzommeputa. Tinye 1/2 tsp nke nnu ma ọ bụrụ na ị na-eji bọta na-enweghị atụ.
▢14 oz (397 g) Mkpụrụ shuga
▢abụọ buru ibu (abụọ buru ibu) Akwa
▢abụọ tsp (abụọ tsp) Vanilla wepụ
▢42 oz (1191 g) AP ntụ ọka
▢3 tsp (3 tsp) Ntụ ịme achịcha
▢abụọ tsp (abụọ tsp) Mmiri ara
▢1/2 tsp (1/2 tsp) Cinnamon (nhọrọ)
Debe butter butter, (nnu ma ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ bụrụ na ọ nwere, Creamed bọta kwesịrị ịdị mma ma na-acha odo odo na agba.
Tinye akwa 1 buru ibu na ụlọ okpomọkụ ma jikọta ya na ọkara (4 na Kitchenaid igwekota) na nkwụnye igwekota ruo mgbe etinyere ya. Ghichaa nnukwu efere mgbe ọ dị mkpa iji jide n'aka na akwa na-etinye.
Tinye 1 tsp nke wepụ vanilla. Mix ruo mgbe dị webatara.
Na efere dị iche, hichaa ihe akọrọ (AP ntụ ọka, ntụ ntụ, nutmeg) ọnụ.
Tinye ihe akọrọ n'ime igwekota ihe nro na scoop (ihe dika 1/3 nke mkpokọta akọrọ n'otu oge) ma gwakọta ya ruo mgbe agwakọtara ya. Bido igwekota na nwayọ rue mgbe ntụ ọka malitere itinye, wee gbanwee ruo ọkara. Ghichaa nnukwu efere dị ka ọ dị mkpa iji tinye ya n'ụzọ zuru ezu.
Tinye 1 tsp nke mmiri ara ehi ozugbo egosiputa ntụ ọka. Nọgide na-agwakọta na nwayọ ruo mgbe mgwakota agwa ghọrọ oke siri ike.
Bechapu igwekota efere, kechie sugar kuki mgwakota agwa ke plastic Kechie na zuo ike ke refrjiraeto 2 awa.
Igwakorita kuki mgwakota agwa ma buputa kuki mgwakota agwa ruo mgbe mkpa ịkpụ ụdị kuki. Jiri kuki cutter ka bee ụdị edo.
Tinye kuki na mpempe akwụkwọ ejiri akwụkwọ akpụkpọ anụ mee. Wepu mpempe kuki n'ime friji ruo ihe dị ka nkeji 15 iji zuo ike ọzọ.
Ime kuki chiri na 350ºF maka nkeji 10-14 dabere na kuki. Kuki ga-abụ ntakịrị aja aja ọlaedo na nsọtụ. Chilled kuki mgwakota agwa ga-edebe ya ọdịdị na oven ma ghara ịgbasa ma ọ bụ ogologo.
Na-eje ozi:1kuki|Calorisị:Ogbe 161kcal(8%)|Carbohydrates:iri abụọg(7%)|Protein:1g(abụọ%)|Abụba:8g(12%)|Abụba Ajuju:4g(iri abụọ%)|Cholesterol:28mg(9%)|Sodium:Ogbe 71mg(3%)|Potassium:53mg(abụọ%)|Sugar:8g(9%)|Vitamin A:Ogbe 250IU(5%)|Calcium:iri abụọmg(abụọ%)|Iron:0.8mg(4%)
ndị isi 5 nba kachasị oge niile
esi mee ka achicha gị ooh
ọhụrụ strawberry achicha Ezi ntụziaka site ọkọ
ihe dị ọhụrụ na netflix